5 Google Play စတိုးနှင့်အခြားနည်းများကိုမည်သို့အန္တရာယ်ကင်းစွာအသုံးပြုနိုင်မည်နည်း Androidsis
မကြာမီက Google သည် Play Store နှင့်၎င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဥရောပပိုင်နက်အတွင်းရောင်းဝယ်သော Android terminal များတွင်ထည့်သွင်းရန်အတွက်အားသွင်းတော့မည်ဖြစ်သည်။ Mountain View အခြေစိုက်နိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီကြီးသည်ပေးဆပ်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည်။ ဒါကမြင့်တက်ခဲ့သည် သိပ်မဝေးလှသည့်အနာဂတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Google Play Store သို့အခြားစတိုးဆိုင်များတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အတူ Android forks များကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်.
ဒါကြောင့်မို့လို့သင့်ကို application များနှင့်ဂိမ်းအချို့စျေးကွက်ကိုသိစေချင်သောကြောင့်ဒီနေ့ငါဒီကိုယူလာတယ် ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာ ၂ ခု သင်၏ Android ဖုန်းများမှယခုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
2 ၅ Google Play စတိုးအတွက်ရွေးစရာများ
2.1 အမေဇုံ Appstore
2.4 APK ကိုကြေးမုံ
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သင့်အားအကြံပေးမည့် Android အတွက်ဤဝဘ်စာမျက်နှာများသို့မဟုတ်အပလီကေးရှင်းများသည်သင်သိရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်လုံခြုံပြီး malware ကင်းသောဆိုဒ်များဖြစ်သည်နောက်တစ်ခုက apk format ရှိသည့်ဖိုင်များ၊ ၎င်းတို့မှကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်နိုင်သော application များနှင့်ဂိမ်းများ၊ အခြားရွေးချယ်စရာစတိုးဆိုင်များမှ Google Play Store သို့ကူးယူခြင်းဖြစ်သည်။
ဤအရာများတွင်ကျွန်ုပ်တို့အတိုချုပ်ဖော်ပြနိုင်သည် apk များတပ်ဆင်သောအခါလုံခြုံရေးအခြေခံများ:
- အလိုအလျောက်တပ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်အပ်ပလီကေးရှင်းများအားအပ်ဒိတ်စတိုးမှတစ်ဆင့် Google Play စတိုးသို့ခွင့်မပြုပါ - ဤအခြားရွေးချယ်စရာစတိုးဆိုင်များမှဒေါင်းလုတ်ဆွဲထားသောလျှောက်လွှာကိုဘယ်တော့မှတိုက်ရိုက်မထည့်ပါနှင့် - apk ကိုမတပ်ဆင်မီ scan ဖတ်ပါ Virustotal.com ကွန်ရက်စာမျက်နှာကတဆင့်
ဤအရာအားလုံးကိုအလွန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ထားပြီးကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ဤအကြံပြုချက်များကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်သည် ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာ ၂ ခု ဘာစာရင်းအောက်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်
ပထမ ဦး စွာပြောရမယ်ဆိုရင်၊ ကျွန်တော်ဟာ Google Play Store မှာအောက်ပါရွေးချယ်စရာများကိုတင်ပြသည့်အစီအစဉ်သည်ဒီရွေးချယ်စရာစျေးကွက်တစ်ခုချင်းစီကကျွန်ုပ်တို့အားတင်ပြသောအရည်အသွေးနှင့်မဆိုင်ပါဘူး
El အမေဇုံ Appstore ၎င်းသည်ဂူးဂဲလ်ပလေးစတိုး၊ အွန်လိုင်းအသုံးပြုသူအားလုံးနီးပါးသိထားသည့်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတစ်ခုနှင့်အွန်လိုင်းအရောင်းကုမ္ပဏီကြီး၏ Kindle ဆိပ်ကမ်းများ၌စံသတ်မှတ်ထားသောစတိုးဆိုင်တစ်ခု၏ရွေးချယ်စရာများကြားမှဂန္ထဝင်ဖြစ်သည်။
အမေဇုံဒီဇိုင်းပါသည့်လျှောက်လွှာတစ်ခုနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောလျှောက်လွှာများနှင့်ဂိမ်းများကိုလစာနှင့်အခမဲ့ရနိုင်သည့်အပြင်ကျွန်ုပ်တို့လည်းရှာဖွေနိုင်သည် Amazon သို့မဟုတ် Amazon ၏ကိုယ်ပိုင် Appstore တွင်လျှော့စျေးအတွက်ရွေးရန်ဒင်္ဂါးများဝင်ငွေ.
ဤနေရာတွင်နှိပ်ခြင်းဖြင့် Amazon Appstore ကိုရယူပါ
ဤပို့စ်၏အစတွင်သင့်အားထားခဲ့သည့်ဗီဒီယိုတွင်တင်ပြသောဒုတိယလျှောက်လွှာမှာလျှောက်လွှာဖြစ်သည် F-Droidတရား ၀ င်ဂူဂဲလ်စတိုးမှဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သောအခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းအားလုံးနီးပါးကိုတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်အတွက် Play Store အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာစတိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုသည့်အခြားရွေးချယ်စရာ Application ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Android တွင်ထည့်သွင်းစရာမလိုပဲ apk format ဖြင့် download လုပ်ပါ၊ အပလီကေးရှင်းကိုပြုပြင်လိုသောသူများ (သို့) သင့်လျော်သည်ဟုယူဆသောအချိန်တွင်၎င်းတို့ကိုထည့်သွင်းရန်ပင်စုဆောင်းလိုသူမည်သူမဆိုအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
စကားမစပ်, F-Droid သည်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်Android အတွက်ကိုယ်ပိုင် application ရှိပါတယ် ဒီတူညီတဲ့ link ကိုမှ download လုပ်ပါ.
နောက်ထပ်ကျွန်ုပ်အကြံပြုလိုသည့်အချက်မှာ Apptoide, အခြားအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးတွင်သိုလှောင်စတိုးဆိုင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် apk နှင့်ပတ်သက်သည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ Androids အတွက်လုံးဝလုံခြုံသော application ဖြစ်သည်။
ဤအပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ် Play Store သို့အခြားရွေးချယ်စရာစျေးကွက်နှင့်ပြproblemနာမှာကျွန်ုပ်ရှာဖွေခဲ့သောအခြားစျေးကွက်များမှကဲ့သို့အခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းများကိုရှာဖွေနိုင်ခြင်းအပြင် Apptoide မှရှာဖွေနေသည့်အရာအားလုံးကိုရှာဖွေနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ပြုပြင်ထားသော application များနှင့်ငွေပေးချေသည့် application များနှင့်ဂိမ်းများကိုရှာဖွေရန်သွားလျှင်အခမဲ့ဖြစ်သည်.
ထို့ကြောင့်အရေးတကြီးလိုအပ်ရန်လိုအပ်သည် ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့လုံခြုံရေးအကြံပြုချက်တွေကိုလိုက်နာပါ။ အမှားတစ်ခုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android သည်မည်သည့်အန္တရာယ်အမျိုးအစားမဆို ၀ င်ရောက်စေခြင်းငှါအန္တရာယ်ရှိသောမည်သည့် malware အမျိုးအစားကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့မလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်။
APK ကိုကြေးမုံ ၎င်းသည်ယနေ့ကျွန်ုပ်ကျွန်ုပ်အကြံပြုသောဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးသို့ပြောင်းနိုင်သောအခြားစတိုးဆိုင်တစ်ခုဖြစ်သည် Android အတွက်ကိုယ်ပိုင် application မရှိဘူးအမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံး browser မှဝက်ဘ်ကိုဖွင့ ်၍ desktop ကိုတိုက်ရိုက် ၀ င်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်အခြားအပလီကေးရှင်းတစ်ခုအနေနှင့်လည်းအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အလွန်လိုအပ်သည်မဟုတ်ပါ။
အရာကနေလျှောက်လွှာ Play Store မှမည်သည့် application ကိုမဆိုတိုက်ရိုက် download လုပ်ပါနောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးသတင်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Play Store သို့မရောက်ရှိသေးသောသူများသို့မဟုတ် Google Play စတိုး၏အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်များအတွက်မှတ်ပုံတင်စရာမလိုဘဲ Beta သို့မဟုတ် Alpha status ရှိ application များကိုရှာတွေ့နိုင်သည်။
ဒီကိုငါတို့ထည့်ပါ တရားဝင်အသုံးချပရိုဂရမ်များကိုမည်သည့်အသုံးအနှုန်းမှမလုပ်ပဲ download လုပ်နိုင်သည် ပထဝီဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များသို့မဟုတ်တုန်လှုပ်စေသောပစ်လွှတ်မှုများကြောင့် Play Store တွင်မရရှိနိုင်သည့်ထိုအက်ပလီကေးရှင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Android မြင်ကွင်းပေါ်ရှိဂူးဂဲလ်ပလေးစတိုးအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်ကိုသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။
သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည် APK ကြေးမုံတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် ဒီ link ကိုနှိပ်ပါ.
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အနည်းဆုံးတော့သင့်ကို Google Play စတိုးအတွက်ရွေးချယ်စရာစတိုးတစ်ခုအနေနဲ့အကြံပြုပါသည်။ Malavida.com ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ် ဦး ကအခြားရွေးချယ်စရာစတိုးဆိုင်, ဒီအကြံပြုချက်များအတွက်တစ် ဦး တည်းသာယနေ့ ၎င်းကိုစပိန်လူမျိုးတီထွင်သူများကဖန်တီးထားသည်အထူးသဖြင့်ကြိုးစားအားထုတ်နေကြသောဗလင်စီယာယောက်ျားလေးများအုပ်စုတစ်စု။
ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏အားသာချက်များ၊ သို့မဟုတ် Google Play စတိုးမှအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးရိုးသားရန်အတွက်ရိုးသားမှုအားများစွာတိုးတက်စေနိုင်သည့်၎င်း၏ဒီဇိုင်းအစိတ်အပိုင်းကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့တည်ရှိနေသောအားသာချက်အချက်နှစ်ချက်ကိုသတိပြုသင့်သည်။ အားလုံး၏ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်ပါတယ် လမ်းညွှန်စကားပြောခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်သော apks ဖိုင်များ၏အမြန်နှုန်းအရဝက်ဘ်ကိုယ်တိုင်၏အရှိန်.
ဒုတိယနှင့်အရေးမကြီးသည့်အချက်တစ်ခုအနေနှင့်ဤလူများသည်၎င်းတို့၏စျေးကွက်တွင်စုဆောင်းထားသည့် application များကိုဖြစ်နိုင်သမျှနောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်မြှင့်ရန်ကြိုးစားနေမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြသင့်သည်။ အရာအတွက်တစ် ဦး ကအလွန်ကြီးစွာသောအားထုတ်မှု သက်ဆိုင်မှု၊ ထိပ်၊ စသည်ဖြင့်အသစ်ပြောင်းခြင်းများကို ဦး စားပေးပါ.
အတိုချုပ်ပြောရရင်၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ Google Play Store ကိုမှီခိုစရာမလိုတော့သည့်အတွက် application များကို APK format ဖြင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည့်အလွန်လွယ်ကူသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်။ အကယ်၍ သင်သည် app store ကိုဖျက်လို။ လိုချင်ပါက Play စတိုးကိုပြန်လည်ရယူနိုင်သည်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမင်းတို့ငါတို့ကိုစွန့်ခွာသွားတဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းမှာတွေ့နိုင်တယ်။
သင်ဒီမှာအထိ ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာ ၂ ခု, ဤဆောင်းပါး၏အစမှာငါစွန့်ခွာခဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာငါသည်သင်တို့ကိုအလွန်အသေးစိတ်ပြသသကဲ့သို့သင်တို့ကိုသူတို့ကသူတို့ကိုဘေးကင်းလုံခြုံအသုံးပြုရန်များအတွက်သက်ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များပေးသောအခြားရွေးချယ်စရာစျေးကွက်များ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » ၅ Google Play စတိုးအတွက်ရွေးစရာများ